Fishing Equipment, Azu Rod nhazi Machine, angling Test Machine - Tonglian
Nwere a ọkachamara n'ichepụta otu, na-achọpụta ihe ọhụrụ ngwaahịa, magburu onwe ya mma na ohuru ọrụ echiche.
Na a pụrụ ịdabere na ngwaahịa mma na ezi obi ọrụ aha, ibu kasị ọkachamara ụlọ ọrụ ndú.
Echichi: anyị ga-ezitere technicians ka onwe na-na saịtị echichi na debugging na ngwá na-azụ pesonel.
Weihai Tonglian azu akụrụngwa factory, emi odude ke mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo - Shandong ógbè Weihai City Village Industrial Mpaghara, ọkachamara na mmepụta nke azu, golf n'ichepụta ngwá, na ihe ịga nke ọma ndọtị nke mmepe nke nnukwu dayameta iko tube, ndị ọzọ ụlọ ọrụ carbon tube olu ubi ịkpụzi akụrụngwa.
Large n'obosara anwụrụ polishing na ọnwụ igwe
Large n'obosara coring igwe
Gantry bọl ịghasa anwụrụ igwe